Inona avy ireo famantarana ny fo tsy salama? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Fahasalamana amin'ny fo - fanontaniana sy valiny voatanisa
Fahasalamana amin'ny fo - fanontaniana sy valiny voatanisa
Inona avy ireo famantarana ny fo tsy salama?
Mitandrema manokana amin'ireo olana ireo:
Tsy fahatokisan-tratra. Io no famantarana mahazatra indrindraam-poLoza.
Marary aretin-koditra, tsy fihinanan-kanina, marary fo, na marary vavony.
Fanaintainana izay miparitaka amin'ny sandry.
Mahatsiaro ho sadaikatra na maivana ianao.
Aretin-tenda na valanoranom-bava.
Mora reraka ianao.
6.2 tapitrisa ny olon-dehibe amerikana tratran'ny aretim-po.
Manakaiky ny 400000 ny olona maty tamin'io tamin'ny taona 2018. Matetika ny olona dia manakorontana ny tsy fahombiazan'ny fo amin'ny taova tsy mandeha. Raha ny tena izy dia rehefa tsy afaka mamoaka ra tsara ny fonao.
Andao hiresaka mariky ny tsy fahombiazan'ny fo 9 izay tsy tokony holalanao mihitsy. Mikohaka be ve ianao? Alina? Mihabetsaka ve ianao? Manana olana amin'ny fifohana rivotra ve ianao? Andraso, mahatsapa ho mamaky ny tratrao ve ny fonao? Miresaka an'izany rehetra izany izahay AND more
Fandram-po ve tato am-poko tato ho ato? Voamarikao ve fa midoboka tampoka ny tratranao? Fahatsapana tahotra sa tsy izany? Ireo dia palpitations. Raha atao famaritana, ny palpitations dia fahatsapana ny fikapohana haingana, ny fikoropahana ary ny fikapohana. Ny olona sasany dia miaina izany matetika raha ny hafa kosa manana azy io indraindray, tsy maninona, andao hisakafo iray minitra amin'ny siansa.
Ny palpitations maro dia manomboka rehefa mifanintona mialoha ny efitrano ambony ao am-ponao. Eny, manana efi-trano ny fonao. Rehefa mitranga izany dia miala amin'ny gadona ny fonao.
Misy antony maro mahatonga ny palpitations. Ny zavatra toy ny siramamy ambany, ny tsy fahampian-drano ary ny potasioma ambany dia samy manana ny andraikiny avokoa. Na ny kafe be loatra aza amin'ny maraina dia afaka manampy.
Na inona izany na inona, ny fonao dia ketraka. Ny olona saika hanjary tsy fahombiazan'ny fo dia azo inoana fa voan'ny aretin-tratra. Raha tsikaritrareo fa manana palpitations betsaka noho ny mahazatra ianareo dia aza atao ambanin-javatra izany.
Miresaha haingana amin'ny dokotera ary avy eo. Inona no palpitation ratsy indrindra nanjo anao? Inona no antony? Resadresaka ifanaovan'ny bibidia eto amintsika
Mahazo lanja Ny fikafika tampoka amin'ny mizana dia manaitra, ary maro ny antony mety hitranga. Ny sasany amintsika dia mila manova tsotra fotsiny ny fahazarantsika mihinana. Ny olona tsy mahomby amin'ny fo dia hiaina fiovaovan'ny lanjany.
Raha sitrakao, raha mihabe ny lanjanao dia miaina tosidra ambony ianao. Tezitra ny fonao tamin'ny fomba nitondranao azy. Fa somary sarotra kokoa io.
Raha miakatra be ny tosidranao ary miaraka amin'ny fiovan'ny lanjany dia mety ho famantarana izany fa manakaiky ny tsy fahombiazan'ny fo. Matetika ny olona manana fo ratsy dia mahatsikaritra fa mitombo 2 ka hatramin'ny 3 pounds ny lanjany ao anatin'ny 24 ora fotsiny. Mety nahazo 5 kilao mahery ianao tamin'ny faran'ny herinandro.Raha manana ny iray amin'ireo soritr'aretina hafa ianao ary mahatsapa fiakarana tampoka amin'ny fotoana iray, manatona dokotera.
Tandindomin-doza ny fahasalamanao. Fanina sy havizanana Mitovy amin'ny fahazoana lanja, be dia be ny antony mahatonga antsika ho reraky ny sahirana na reraka. Fa ho an'ny olona marary fo, dia mitranga izany amin'ny fotoana ifohazanao maraina.
Afaka mahatsapa fanina ianao rehefa mifoha. Rehefa mitranga tsy tapaka io dia manambara ny fonao fa mila fanampiana izy. Raha tsy mandeha tsara ny fonao dia tsy hivezivezy any amin'ny atidoha toy ny taloha ny ra.
Mahatsiaro ho maivana sy very hevitra ianao io. Ny fanandramana mandeha mahitsy dia ho raharaha be. Rehefa reraka noho ny tsy fahombiazan'ny fo dia miasa ny fonao hantsaka ra rehefa mandeha ny fotoana, ny fo dia mila manala ra amin'ny faritra hafa, indrindra fa ny rantsam-batana.
Ny ra be loatra dia hahatonga ny fonao sy ny ati-dohanao ho be loatra. Mandreraka anao izany. Tsy ho vitanao ny manao ny asanao, ho reraka be ianao.
Ny kohaka Raha marary fo ianao, miomàna hikohaka rano be. Ny tsindry ao am-ponao dia miteraka tsiranoka betsaka ao amin'ny havokavokao Ny karazan-tsiranoka rehetra ao amin'ny havokavokao dia hiteraka kohaka tampoka sy saika mahery vaika. Ny moka izay hikohinao dia fotsy matetika, saingy eto no tokony hahataitra anao.
Raha loko mavokely ny tsiranoka, midika izany fa misy rà kely ao dia tokony miresaka amin'ny olona iray. Misy antony hafa mampiahiahy raha mikasika kohaka ghs ohatra, raha mihombo ny kohakao rehefa mandeha matory ianao, dia mety hampitandrina anao ny aretin-tratrao momba ny edema havokavoka. Midika izany fa be loatra ny tsiranoka ao amin'ny havokavoka.
Izany dia mitondra ahy amin'ny teboka manaraka. Nefa alohan'ny handehanantsika lavitra, manandrana mahazo endrika ve ianao? Mitandrema satria mila mihinana sakafo mety ianao. Zahao ny lahatsoratray farany momba ny sakafo 50 hisorohana raha mitady hihena ianao.
Miverina amin'ny lisitry ny tsy fahombiazan'ny fo. Ny tsiranoka be loatra ao anaty tratra dia mety hahatonga ny olona iray hiaina fofonaina vokatry ny tsy fahombiazan'ny fo. Mety hiharatsy izany raha voan'ny edema ny havokavokao.
Ny fahakelezan'ny fofonaina dia mety hitranga amin'ny toe-javatra rehetra. Na milalao baskety ianao na miaraka amin'ny namanao na mandry miala sasatra. Ny mandainga dia iray amin'ireo fanamby lehibe atrehin'ny havokavokao.
Ho hitanao fa sempotra sy mifoka rivotra be ianao. Hisy fiatraikany amin'ny fotoana atorianao izany. Ny iray amin'ireo zavatra tsara indrindra azonao atao amin'ity toe-javatra ity dia ny mitondra ondana roa miaraka aminao, apetraho eo amboninao ny lohanao.
Amin'izany no hampitomboana ny vatanao ambony. Araka ny nolazaiko dia afaka manampy ny tsiranoka ao amin'ny havokavoka. Fa ny tsy fahombiazan'ny fo koa dia mahatonga ny rào ao amin'ny lalan-drà pulmonary hiverina any amin'ny fo.
Malemy loatra ny fonao ka tsy maharaka ny famatsian-dra ary manomboka mikoriana ao anaty havokavokao ny tsiranoka. Ny fahaverezan'ny fiankinan-doha dia mety hahatonga anao tsy te hihinana intsony. Ho an'ny sasany, mety ho zavatra tsara io.
Rehefa dinihina tokoa, ny tsy fanjarian-tsakafo tsy fahampiana dia iray amin'ireo nitondra anao teto. Izany fahaverezan'ny fahazotoan-komana izany dia mitranga rehefa mahazo rà latsaka ny rafi-pandevonan-kanina. Tsy mety amin'ny fahaverezan'ny lanja noana.
Ataovy ao an-tsaina fa mbola hahatsiaro ho voky ny vavoninao. Toy ny hoe vao avy nihinana ny sakafon'ny fiainanao ianao. Mety hahatsapa ho somebiseby kely koa ianao.
Amin'ny tranga sasany aza marary. Raha maharitra mandritra ny fotoana fohy io fahaverezan'ny fahazotoan-komana io dia ho very ny lanjanao sy ny hozatrao. Ny vatanao dia tsy mandray kaloria sy otrikaina mety. Raha tsy manana antony hafa ianao tsy hanoanana dia tsara ny manahy.
Manana olana amin'ny fihinanana sakafo ve ianao? Miresaka amin'ny matihanina faran'izay haingana. Fisafotofoto nolazaiko teo aloha fa ny tsy fahombiazan'ny fo dia mitarika ho amin'ny fanina. Ho hitanao fa sarotra ny mitazona ny fandanjalanjanao, hahatsapa ho adin-tsaina koa ianao.
Midika izany fa matetika dia sarotra aminao ny mahatakatra izany. Angamba koa disorientation sy very fahatsiarovana. Ny tsy fahombiazan'ny fo dia mety hiteraka tsy fifandanjana amin'ny elektrolita ao amin'ny vatanao.
Tsy ho ela dia hanomboka hihazona ny sodium ianao. Ny habetsahan'ny sodium miova haingana ao amin'ny ranao dia hametraka ny adin-tsainao. Tsy hivezivezy ampy izany.
Miteraka fikorontanana izany. Rehefa milaza aminao ny olona amin'ny fiainanao fa misosa ny fitadidianao na mila ampahatsiahivinao ny zavatra amin'ny fotoana rehetra ianao dia olana izany. Ny tsara indrindra dia ny miresaka amin'ny mpandinika ny fo raha afaka.
Ny fivontosan'ny faritra ambany: famantarana hafa mampatahotra ity. Mbola bebe kokoa aza, satria mety hitranga tampoka izany. Ny tsy fahombiazan'ny fo matetika dia miteraka fivontosan'ny tongotra sy tongotra ary vavony.
Azonao atao ny manome tsiny ny edema amin'izany. Ny fihenan'ny tsiranoka be loatra ao amin'ny sela dia nahatonga ny vatanao hahatsiaro ho voky. Tsy ho ela dia ho tsikaritrao fa mihombo ny faritra ambany amin'ny tongotrao; ho sarotra aza ny mametraka kiraro.
Mikasika ny vavoninao, ny fivontosana koa dia hahatonga ny fahatongavanao hitombo lehibe kokoa. Manome anao endrika bontolo ity. Mandritra izany fotoana izany, ny ranoka noresahintsika teo aloha dia hanomboka hipoitra ao amin'ny havokavokao.
Fikiana matetika Mandehana any amin'ny trano fidiovana matetika kokoa noho ny teo aloha? Ary im-betsaka isan'andro? Ity dia famantarana iray hafa amin'ny tsy fahombiazan'ny fo izay tsy hitanao fotsiny: Ny fo malemy dia paompy kely kokoa ny voa ao amin'ny voa, satria sahirana loatra manosika ny ati-doha izy. Izany dia mitarika fihazonana tsiranoka bebe kokoa. Afaka mandeha an-tongotra mandritra ny andro ianao nefa tsy mampiasa kabine.
Izany hoe, amin'ny fotoana hatorianao amin'izay alina izay dia ho hitanao fa mandeha mitsangatsangana any amin'ny trano fidiovana ianao. Betsaka ny soritr'aretina mahatsiravina amin'ny fo malemy sy malemy. Taova mampatahotra tokoa izy io rehefa tsy mandeha tsara.
Na iza na iza, izaho koa dia te-hanao izay azony atao mba hihazonana izany ho salama, sa tsy izany? Jereo ny lahatsoratray farany momba ny Famantarana 12 izay efa ho avy manafika fo ianao. Sa ahoana ny fomba 10 hitandrovana ny fonao salama? Mahatsapa fanaintainana sy fahakiviana ve ianao? Mety hatsembohana adala angamba? Mety hanampy izany raha miala amin'ny sigara sy misakafo tsara ianao. Efa nijaly tamin'ny tsy fahombiazan'ny fo ve ianao? Ampahafantaro anay amin'ny hevitra etsy ambany.
Inona avy ireo fomba 10 hitazonana ny fonao ho salama?
Fomba 10 hitazomana ny fonao ho salama
Atsaharo ny sira.
Mihinana siramamy kely kokoa.
Fero ny tavy mahavoky.
Fenoy voankazo sy legioma.
Mandehana mitady trondro bebe kokoa.
Ahenao ny alikaola.
Makà fanatanjahan-tena bebe kokoa.
Na dia matory aza ianao dia miantoka ny taova fa manana fikorianan'ny rà ampy ny vatanao. Izany no antony maha-zava-dehibe ny fitazonana ny fonao ho salama.
Manomboka amin'ny fijerena ny tosi-dra hatramin'ny fizahana kolesterola sy fitazonana lanja mahasalama Misy fomba maro hitazonana ny fonao ho salama. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba azy rehetra sy bebe kokoa isika. Andao àry hanomboka! # 1 Miala amin'ny sigara Ity dia iray amin'ireo teboka miharihary.
Ny sigara dia misy akora misy poizina toy ny paraky sy ny tara. Samy manimba ny tendany, ny havokavoka ary ny fo. Ho fanampin'izany, ny sigara koa dia misy akora simika miditra ao amin'ny lalan-dranao sy ao am-ponao.
Izy ireo dia afaka manimba ny taova ary misy fiatraikany amin'ny lalan-drà sy lalan-dranao. Noho io antony io, raha mifoka ianao, dia ampirisihinay hijanona eo alohan'ny fifohana sigara. # 2 Fehezo ny fihenan'ny ranao Rehefa miakatra ny tosidranao dia manindry ny fonao izy ka manery azy hantsaka haingana kokoa ny ra.
fipihana ambany hidiny
Mijaly ny lalan-drà sy ny lalan-dranao. Raha izao no mitohy dia mety hiteraka olana lehibe izany. Tsy mikapoka fotsiny isika.
Ny fiakaran'ny tosi-dra koa dia misy ifandraisany amin'ny olan'ny kardia. Raha manana an'ireto ianao dia mamporisika anao hijery dokotera. Satria olana mifandraika amin'ny fomba fiainana izany, ny fomba fiaina tsy misy fihenjanana sy fahasalamana dia afaka mitazona azy io ho madio.
Nanamboatra lahatsoratra momba ny sakafo mampihena ny tosidranao ihany koa izahay. Hamarino tsara fa hijery azy io ianao. Raha tianao ity lahatsoratra ity hatreto, kitiho ny bokotra 'Subscribe' ary tsindrio ny lakolosy fampandrenesana.
Amin'ity fomba ity dia hitazona ny toetranao miaraka amin'ny atiny Beast rehetra mahafinaritra anay. # 3 Mandraisa anjara amin'ny fampihetseham-batana Mety hanao zava-mahatalanjona ao am-ponao ny fampihetseham-batana mahazatra. Ny matanjaka kosa, mety tsy hahasoa anao.
Fa kosa, ny fampihetseham-batana antonony dia afaka manatanjaka ny hozatry ny fonao. Izy io koa dia afaka manampy ny fo hompoa ny rà amin'ny tahan'ny antonony mba hahazoana antoka fa voafehy ny tosidra. Rehefa miteny isika hoe «manao» fampihetseham-batana dia midika hoe mandeha matetika, mihazakazaka ary mandeha bisikileta foana.
Mazava ho azy, raha olona fanatanjahan-tena ianao dia te-hilalao baolina kitra, rugby na baskety. Ary koa, tsy misy maharatsy ny maka aina ampy alohan'ny sy aorian'ny lalao. # 4 Misotroa Rano Be dia be ny 70% amin'ny vatanao dia rano.
Ny rano dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fizotran'ny biokimika amin'ny vatanao, manala ny poizina amin'ny vatanao. Izy io koa dia manohana ny fivezivezy ra sy oksizenina ary manome antoka fa tsy ketraka loatra ny fo. Raha tsy misotro rano ampy ianao dia lasa tsy ampy rano ny vatanao, ohatrinona ny rano tokony hosotroinao? Ary nanao lahatsoratra momba an'io izahay, mba jereo izany. # 5 Zahao ny diabetao Raha avo loatra ny siramamy ao amin'ny ranao dia mahazo Diabeta ianao, araka ny efa fantatry ny maro aminao.
Ity misy zavatra mety tsy fantatrao. Misy fiantraikany amin'ny lalan-dra sy hozatra ary sela ao am-ponao ny diabeta. Na tsy manana olana amin'ny fo aza ianao amin'ny voalohany, ny diabeta dia mety hiteraka olana amin'ny fo rehefa mihalehibe ianao.
Noho izany dia mila mitady fomba hitsaboana ny diabetao ianao izay mitarika aretim-po na kapoka. Andao hiresaka mpamono miadana hafa. # 6 Fehezo ny kôlesterô anao aloha, mila kolesterola ianao.
Ny zavatra matavy ao amin'ny ranao no manampy anao hanana fahasalamana. Ny olana dia manomboka rehefa be loatra ny ranao. Amin'izay fotoana izay dia mila mitady fomba hifehezana azy ianao.
Ny tsy fandanjalanjana ny kolesterola dia miteraka fitohanana eo amin'ny lalan-drà. Mampihena ny fonao izany. Ity adin-tsaina fanampiny ity dia mety hiteraka aretim-po matotra sasany.
Betsaka ny olona manana olana amin'ny kolesterola no iharan'ny aretim-po. Noho izany antony izany, mamporisika anao izahay hitady fomba hitazomana ny fatran'ny kolesterola anao. Azonao atao ny mijery ny lahatsoratray amin'ny 'The 7 sakafo izay manampy amin'ny fampihenana ny kolesterola anao'.
Tena ilaina tokoa amin'ny fikatsahanao fahasalamana. # 7 Fadio ny fisotroana alikaola Mety efa naheno an'izany ianao taloha, fa averinay ihany. Mety hampidi-doza ny vatanao ny fisotroana toaka.
Mampitombo ny tosidranao izany. Mety hiteraka olana aretim-po koa io. Ny olana faharoa dia ny fihinanana alikaola matetika eo amin'ny hozatry ny fonao.
Izany dia mitarika amin'ny aretim-po antsoina hoe cardiomyopathy. Na dia tsy vitanao tanteraka aza ny tsy misotro alikaola, mamporisika anao izahay hampihena farafaharatsiny ny fihinanana azy. Mampahatsiahy antsika izany fa nanao lahatsoratra momba ny mpisotro toaka be fampiasa izahay, raha mbola tsy nanamarina ianao dia ataovy izany. # 8 Fanaraha-maso ny fanjifana sira dia mety ho loharanon'ny sodium sy yode tsara, fa ny fihinanana be loatra an'io mineraly io dia mety tsy ho tsara aminao; ny fihinanana sodium betsaka dia mety mitombo.
Mety hiteraka tosidra izany. Nohazavainay teo aloha tao amin'ny lahatsoratra hoe ahoana no mety hisy fiantraikany amin'ny fontsika ny tosidra na ny fiakaran'ny tosi-drà. Ka ny fampihenana ny habetsaky ny sira dia mety hanampy anao hanana fo salama. # 9 Tantano ny fahaverezan'ny lanjanao dia miteraka olana ara-pahasalamana betsaka.
Toy izany koa no azo lazaina raha tsy ampy lanja ianao. Ny iray amin'ireo taova mety ho voa mafy dia ny fonao. Ny olona matavy loatra dia matetika manana olana hafa toy ny tosi-dra, kolesterola avo, ary diabeta.
Anatin'ity lahatsoratra ity dia efa nohazavainay ny maha-zava-dehibe ny fifehezana azy ireo mba hitazomana ny fo salama. Sarotra kokoa ho an'ny olona tsy ampy lanja izany. Ny olona tsy ampy lanja dia mety hiaina karazana aretin'ny lalan-drà.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fomba tokana hivoahana dia ny fitazomana lanja mety, ary amin'izany dia azonao atao ny manatona mpitsabo aretin-tsaina izay hanome ny lanjany mety ho an'ny halavanao. # 10 Free Stress FreeStress, depression, ary ny faharerahana ara-tsaina dia ampahany amin'ny fiainana amin'ny taonjato faha-21. Na inona na inona asa ataonao, na sokajy fiaraha-monina misy anao na ny firenena onenanao, dia mahazatra ny rehetra ny fihenjanana.
Na dia tsy mitarika aretim-po aza ny fihenjanana, dia mampitombo ny risikao hampivoarana azy io, ka izany no antony anoloran-kevitra anao hitandrina ny tenanao tsy hanana adin-tsaina. Raha tena sarotra aminao ny miatrika kilasy tai chi dia afaka mianatra kilasy tai chi ianao. Ity kanto haiady sinoa taloha ity dia tsara ho an'ireo ketraka na sahirana amin'ny adin-tsaina be dia be ary manazava fomba sasany azonao ampiasaina mba hitazomana ny fonao ho salama.
Andao isika handinika hetsika tsotra vitsivitsy azonao atao amin'ny fiainanao isan'andro. # 1 Torimaso Tsara Ny torimaso dia zava-dehibe amin'ny resaka fahasalamana. Mila mahazo antoka ianao fa mahazo torimaso 7 ora farafahakeliny isan'andro.
Ny fandaharam-potoana fatoriana mahasalama dia hiantoka fomba fiaina salama. # 2 Mihaino mozika mampitonyMusic indraindray dia afaka manasitrana anao ary mahatsiaro ho salama tsara. Izany indrindra no antony ilanao fihainoana mozika mampitony.
Hanampy anao ho tony sy hiala sasatra izany. Mila izany fahatsapana izany ianao mba hanamaivanana ny adin-tsaina. Ny karazana notoroana tamin'ity tranga ity dia ny manga, klasika ary jazz. # 3 Misaintsaina ny fisaintsainana dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra hialana sasatra.
Mampitony ny sainao ity fampihetseham-batana ity ary manampy anao hifantoka. Ny tena zava-dehibe dia manampy amin'ny fanatsarana ny toetranao izany. Ny fisaintsainana dia fantatra ihany koa amin'ny fampidinana ny tosidra ao amin'ny vatanao.
Toa vaovao tsara tokoa izany ankehitriny. # 4 Aza mipetraka amin'ny toerana iray ela loatra Ny fipetrahana amin'ny toerana iray dia mety hanimba kokoa noho ny fieritreretanao azy. Tsy ny lamosina, ny andilana ary ny tongotra ihany no voakasik'izany.
Mazava ho azy, maro amintsika no miasa eo alohan'ny solosaina finday mandritra ny ora maro. Na izany aza, mamporisika anao izahay mba hanokana fotoana kely ho anao. Mandritra io fotoana io dia afaka mandehandeha kely ianao.
Ny fihainoana anao dia hanampy anao hiasa hatrany sy hihazona ny hozatry ny fonao ho salama!
Inona avy ireo sakafo 3 voan'ny koloista tokony hosorohana?
'AzamisyENTANA NOVOKARINAizay manana ny teny hoe 'trans,' 'hydrogenated,' na 'hydrogène parlième' amin'ilay marika, izay matetika hita ao anaty nendasina ara-barotraENTANA NOVOKARINA, donuts, cookies ary poti-ovy, ”hoy ny torohevitry ny Dr. DeVane. “Fantaro ihany koa ny isan'ny kaloria avy amin'ny siramamy.
JEREO NY 'ANIO' Asehoy RADIO, SIRIUS / XM 108.SIRIUS / XM 108. >>> IZAO AMIN'NY HERITSY MANASITRANA >>> IZAO IZAO AMIN'NY FAHASALAMANA NY SAKAZANA SY NY FOMBA FOMBA FAMPIASANA AZY SY NY FOMBA FOMBA FANAMPIANA ANAO MANAO ZAVATRA REHETRA MBA HAMPIASAANA NY ZAVATRA REHETRA ARETINA NY ARETINA ARY NY ARETIN'NY FONDRANA ANDPAINS.PAINS.DR.
MEHMET OZ MITONDRA NY DR. OZ SHOW. 'AN'NY' THEDR '.
OZ SHOW. 'ARY MPANORA BOKY Vaovao. ARY MPANORA BOKY Vaovao.
Boky maro no nanoratanao. NANORATRA INDRINDRA INDRINDRA INDRINDRA IZAY NANORATANA ANAO INDRINDRA NY DECAD. MANINO IZAO? MANINO IZAO? >> NY BOKY NOSORATSIKO ANAO >> NY BOKY NOSORATSIKO ANAO IANAO BOEKOKA, NY FITSARANA IHANY NO NANGATAKANA NY SIANSA.
TE HANAMPY ANAO DOKOTRA NY DOKOTORO ANAO AMIN'NY PROSESY. NA MANAMPIASA NY PROSESY. FA ny dokotera tsy mitsahatra mahalala bebe kokoa, fa ny dokotera kosa mahafantatra foana fa manana ny siansa sarotra sisa isika, fa manana siansa sarotra isika hanaporofoana fa ny famenon-tsakafo dia manolotra mpanasitrana azo tsapain-tanana ho an'ireo mpanasitrana mahatalanjona indrindra ho an'ny amerikana lehibe indrindra. >> METY MIKASIKA NY HANANA.RICANS. >> METY FIASA ANAO.
NY FANOMPOANY. NY FANOMPOANY. >> NY ZANANY dimy. >> NY ZANANY dimy.
RAY AMIN'NY BENEFITS.FATS WITH BENEFITS. 'I', PROTEINS IDEAL. 'ME', PROTEINS IDEAL.
Voankazo fanampiny sy voankazo ary voankazo fanampiny ary zava-maniry ary SUGAR.SUGAR. RAHA MIDIRA ZAVA-TSAKAIZANA REHETRA REHEFA miditra amin'ny toeram-pivarotana iray, mitsidika ASTORE, AZA MANDEHA AMIN'NY FARMACY, AZA MANDEHA AMIN'NY FARMACY AVY amin'ny LEACHE.
TSY NISY HEVITRAO IZAO TEMPERATURE, MANARAKA NY ZAVATRA REHETRA Ahoana no fomba hamalian'ny vatanao anao. Toro lalana momba ny fomba hamalian'ny vatanao anao. >> ETO IZAHAY MANANA ohatra tsara. >> ETO IZAHAY MANANA ohatra tsara.
RAY AMIN'NY BENEFITS.FATS WITH BENEFITS. >> Ny aretim-po no tsara indrindra >> Ny aretim-po no ohatra tsara indrindra amin'ny fomba hanadiovan-tsakafo.
Ohatra iray amin'ny fomba hanamasinana ny sakafo. Azonao atao ny mampidina ny zava-mahadomelina CHOLESTEROL anao amin'ny KIELBASA; ZAZA KOLESTEROLY KIELBASA. TSY MIASA INDRINDRA INDRINDRA AZA ATAO ATAONY FA TSY MIASA INDRINDRA IZAO HEVITRAO. NY RATSY LEHIBE dia OMEGA-3NY FATY SADY OMEGA-3FATS.FATS. IREO FANAMPINANA NY ARTERIES ANDRIAMANITRA ARY AOKA IANAO HANASA NY ARTERIES ELPOLOLY .
Azonao atao ny mahazo menaka. TIAKO NY VERSION TENA IZANY. TIAKO NY VERSION TENA IZANY.
HYOLO OLIVA NA NY OLIVA. HYOLO OLIVA NA NY OLIVA. EDEMAME.EDEMAME.AVOCADO MANANA DEMA SADY ANAO.
NY ZAVATRA REHETRA SY NY VATANY, NY ZAVATRA REHETRA ARY NY NUTBUTTER.BUTTERS.IT MANAMPY SATRIA NITSITRAKA AZY, SATRIA MARO NY ZAZA.
ZAZA be. >> TIA PROTEIN MAINY IREO. >> IZAO NO CHICKEN DISH .. >> IZAO NO CHICKEN DISH.
MANDROSO REHETRA HO AZY, MANANA RESIPA HO AZY. IZAO dia misy GRAMS 40 an'ny PROTEIN. IZAO dia misy GRAMS 40 an'ny PROTEIN. Proteinina 40 grama, proteinina 3 grama proteinina 40 grama, tavy matavy 3 grama, tavy mahavoky. >> Milaza traikefa amin'ny sakafo izy ireo >> Milaza ny ho fanandramana amin'ny sakafo tsy ara-potoana.
IREO TSY MANDRAKARIVA IREO. Toa an'i JICAMA ITY. Toa an'i JICAMA ITY.
TSY MISY HEVITRA MISY INDRINDRA INDRINDRA INDRINDRA INDRINDRA INDRINDRA IZAO. >> ETO NY ZAVATRA MOMBA NY VEGETABLES.E IZAY MOMBA NY VEGETABLES.IT NY FOTOTRA NY SAKAFO NO MAMPIASA NY FANANANANA FOFIX IT.FIX IT.FITSIMBINANA MIHAZA MIHAZA, MIARAKA AMIN'NY SAKAFO IRAY IHANY, TE HANAO LALANA? HAY HICK YAJICAMA IANAO.
HAY HICK YAJICAMA IANAO. SOURCE VITAMINY LEHIBE INDRAM-PIHANANANAO. NY NUTRITIONO. >> MANDROMA IZAO. >> MANDROMA IZAO.
Faly be aho. Faly be aho. Lazao amiko ny momba azy. >> AZONAO HAMPIANARINA AMIN'NY ARETINA >> AZONAO HAMPIANARINA AMIN'NY ARETINA IZAY AMERIKANINA 100 tapitrisa. AMERIKANINA 100 tapitrisa.
Zava-misy vitsivitsy momba ny PANL.IN.Zava-misy momba ny PANL.IN.Raha mihinana izany ianao izay tsy manaiky raha mihinana ianao dia misy fiantraikany amin'ny vatanao dia hijaly. >> Karazan'aretina rehetra.
AROTRA. >> ARETANA. >> Fijerena ankapobeny ny solaitrabe. >> MOMBA NY SARY.
TIANY HITADY NY LOHA VOLA IZANY TE HITADY NY LOHARAN'NY RARITRA. NY FANGARIHANA. ATAONAO IZAO.
AZOKO. ARY AZA MAMPIASA - AZA ARY TSY MAMPIASA NARCOTIKA - NY NARCOTICA AZA MIASA AMIN'NY ARETIN'NY KRISTIANA, TSY AZO MIASA TSARA AMIN'NY FANGORITRA KRONIKA. ASA fihinanana.
ASA fihinanana. VOLA - TSY NY ALKOHOLY. VOLA - TSY NY ALKOHOLY.
MIARA-MIHINANA ARY MIHAINA MIARAKA SY MIFANDRAY. MIFANDRAY. IZANY NO SOA FANAHY MASINA.
NY KOPEZ dia sakafo iray. KOPEY dia PAINKILLER.PAINKILLER.
Ny pilina tsy voavidim-bola izay hividiananao pilina tsy voavidim-bola izay vidianao ho an'ny maharary dia mitondrà CAFFEINE INDRO ho an'ny maharary. IZANY dia manodidina ny 40% ny hafa dia momba ny 40% ireo singa hafa ao amin'ny pil. ARY NY VAHOAKA MANARITRA SY NY OLONA MANARAKA AMIN'NY FIAINANY, Kafeina amin'ny fiainany, ny fisotroana kafe dia mety hanena an'izany.
Afaka misotro an'izay ny fisotroana. >> INONA NO ATAON'NY CINNAMON? >> INONA NO ATAON'NY CINNAMON? >> ANTI-INFLAMMATORY IZANY. >> ANTI-INFLAMMATORY IZANY.
I SUGAR dia iray amin'ireo zavatra ratsy indrindra. I SUGAR dia iray amin'ireo zavatra ratsy indrindra amin'ny fanaintainana. HANARITRA. >> Ny fanafody fanaintainana faharoapolo? >> Ny fanafody fanaintainana faharoapolo? >> NY RANO. >> AHOANA NO TSY AZO ATAO MISAINA RANO >> Ahoana no tsy ahafahana misotro rano voalohany? NY VOALOHANY? RAHA MATOTRA IANAO, MBA MAHAROTRA RAHA VOAFITRA IZAO, NY VATANAO MITENY VAIKA, NY VATANAO, mila rano be kokoa.
Mila rano hafa bebe kokoa. ARY NY Rano mangatsiaka dia tsara kokoa ary ny rano mangatsiaka tsara kokoa. >> ARY MIHEVITRA Manampy ny sakafonao? >> ARY MIHEVITRA Manampy ny sakafonao? >> MIOMBY AMIN'NY BOKY MISY CREAM ICE >> MIOMBOKA AMIN'NY VOKA MISY CREAM ICE SATRIA HITADY SNARKYCREAM SATRIA MITADIAVA TEKST DIA MOMBA ANAY.
TEXT MOMBA ANAY. NY AZONAO ATAO TADIDINAO momba ny sakafo dia, azonao atao ny mamorona sakafo, dia ny mamorona SABOTSAKA sakafo ara-pahasalamana izay SADY ara-pihetseham-po, mamy miaraka amina paoma iray, miaraka amin'ny bokotra voanjo iray, PEANUT. RAHA TIANA ZAVA-MISY TSY MISY TSY MISY CRISPY AMIN'NY VAVAKA, dia mahazo CHICKPEAS vitsivitsy.
NY VAVAKA, MBA MANOKA CHICKPEAS vitsivitsy. TIANAO KRISTY, MIFIDIA JOGURTY. TIANAO NY CREAMY, ATAFY NY MIARITRA YOGURT SY BLUEBERRY
Ny sakafo dia tokony hanintona anao. Ny sakafo dia tokony hanintona anao. NY OLOMBELOMBELONTSIKA REHETRA NY OLOMBELONTSIKA satria ny sakafontsika, fa isika kosa dia miara-miasa, ny tantaranay momba ny sakafo no nitondra antsika hiaraka.
Azonao atao ve ny mampatanjaka ny fonao?
Inona ny fanahiana amin'ny kardia?
Cardiophobia dia faritana ho anfanahianafikorontanan'ny olona miavaka amin'ny fitarainana miverimberina momba ny fanaintainan'ny tratra, ny fitempon'ny fo, ary ny fahatsapana somatic somary miaraka amin'ny tahotra ny ho voan'ny aretim-po sy ho faty.
Inona no sakafo atoro ny ankamaroan'ny mpandinika ny fo?
Ny folevitramanantitrantitraENTANA NOVOKARINAtoy ny legioma, voamaina feno, ary trondro misy menaka. IRETOENTANA NOVOKARINAmahasoa amin'ny fahasalaman'ny fo. nylevitramametra ihany koa ny fanodinanaENTANA NOVOKARINAbe siramamy sy sira izany, satria mampitombo ny aretim-po ireo.6 Aogositra 2020
Afaka manamboatra ny tenany ve ny fo?
Fa nyam-podia manana fahaizana manao hozatra vaovao ary metymanamboatra ny tenany. Ny tahan'ny famerenana amin'ny laoniny dia miadana tokoa nefaafaka'tsy manamboatra ny karazana fahasimbana ateraky ny aam-pofanafihana. Izany no mahatonga ny fanasitranana haingana aam-pony fanafihana dia miteraka tavy misy takaitra eo amin'ny toeran'ny hozatra miasa.
Ahoana no ahalalako fa fitaintainanana na olana amin'ny fo izany?
Na dia mahazatra aza ny fanaintainan'ny tratra afanafihana taitaitraary afijanonan'ny fo tampoka, samy hafa matetika ny mampiavaka ny fanaintainana. Mandritra afanafihana taitaitra, ny fanaintainan'ny tratra dia matetika maranitra na antsy ary apetraka eo afovoan'ny tratra. Fanaintainan'ny tratra afijanonan'ny fo tampokamety hitovy amin'ny tsindry na fahatsapana manempotra.
Ahoana no fomba hialako amin'ny fanahiana ao am-po?
Ny fandraisana anjara amin'ny fomba fialan-tsasatra toy ny fisefoana lalina sy ny fialan-tsasatry ny hozatra miandalana dia mety hampihenafanahianaSYam-potaha 'Ny fofonaina lalina dia manampy amin'ny fampiroboroboana ny hozatry ny fivavia, izay miteraka fiasa ao amin'ny rafi-pitabatabana ary manampy amin'ny fampihenana ireo zavatra simika mahatonga ny valin'ny' ady na sidina ', hoy i Isaacson.9 mart 2020
Mahasoa ny marary fo ve ny kafe?
Tsy dia mivoatra ianaoam-potsy fahombiazana.
Misotro iray ka hatramin'ny roa kaopy an'nykafeandro iray dia mety hanampy handroakaam-potsy fahombiazana, rehefa malemyam-posahirana mipaoka ra ampy amin'ny vatana.